Healthcare Qalabka Factory, Shirkado cusub | Shiinaha Healthcare Qalabka-saareyaasha
Home » Products » Healthcare Qalabka
Pulsoxymetri farta Prince-100B3
Prince-100B Taxanaha isticmaalaa screen OLED / STN, SpO2 iyo heerka garaaca wadnaha loo akhrin karaa ka xagal weyn ilaa 170 degree, oo ka sokow, shaashadda laga gediyo kartaa in 2 ama 4 jiho. Dheeraad ah technology Anti-dhaqaaq ka dhigaysa deggan Prince-100B Taxanaha in xaaladaha waxaa u babac dhigaya sida bukaanada qabto cudurka Parkinson.
Pulsoxymetri farta Prince-100B5
Pulsoxymetri farta - Prince-100B
Model cusub Tani waa version kor-to-date of Prince-100B series.And waxaa qaybsada inta badan GEMS of taxane 100B ah. Laakiin keliya
model this awood isagoo biyo-cadeyn, shil-caddayn iyo shoog-caddayn. Xitaa haddii aad si qalad ah u soo daadiyaa, haddii aad daadan biyo on ama haddii aad wada gariiri fartaada halka is baaro, waxaa weli aad u wanaagsan ordi karaan.
Dhab ahaantii Pulsoxymetri ugu fiican farta ilaa iyo haatan.
Oxisensor waa a-saxnimada sare SpO2 baaritaan la isku dhafan circuit cabbirka oxygen.
Tani Easy ECG Monitor waxaa loogu talagalay qiyaaso iyo qoraalana waveform ECG iyo garaaca wadnaha celcelis ahaan bukaanka dadka waaweyn. Waa
lagu dabaqi karo si loogu isticmaalo xarumaha caafimaadka iyo guryaha, oo ku habboon in ay ku shaqeeyaan oo ay bukaanada ama bukkaanku jeebkooda.
Pulsoxymetri Veterinary - Prince-100V
in lagu qalabeeyaa karaa dareemayaal universal ay ka mid yihiin kala duwan
adapters goobaha kala duwan qiyaaseed, sida farta, lugta, foot
Curcurka Pulsoxymetri - Prince-100H (Bluet ...
Pulsoxymetri Curcurka waxaa loogu tala galay in la isticmaalo in isbitaalka, kale
beesha caafimaad iyo guriga. Waa la heli karo iyo
ku haboon in aad la socon SpO2 in muddo dheer halka
hurdada ama hawlaha kale ee maalin walba isku mar
Palm Pulse Pulsoxymetri - Prince-100F
Alaabta Tani waa dabaqi karo montioring SpO2 iyo PR.